Loto, pesta eto Antananarivo : Tompon’andraikitra voalohany ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana -
AccueilRaharaham-pirenenaLoto, pesta eto Antananarivo : Tompon’andraikitra voalohany ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana
Nikombom-bava tanteraka ramatoa Ravalomanana Lalao, izay ben’ny tanànan’Antananarivo, na dia efa eto amin’ny tanàna izay hiadidiany aza no nandrenesana olona matin’ny pesta. Ny antony, angamba, dia tsy nanome toromarika handraisana fepetra haingana ingahy mpanolotsainy manokana
( rangahy vadiny) izay variana manao “road show politique” ( araka ny fomba fiteniny azy), ka tsy laharam-pahamehana ho azy ireo ny fijerena akaiky ny fepetra nisorohana haingana ny pesta. To teny amin’ny ben’ny tanàna mantsy io filoha teo aloha, izay efa nampiseho ombieny ombieny fa izy no tena atidoha mitondra ny Cua any ambadika any, ka izay ambarany no tanterahina.
Avy amin’ny alalan’ny loto, moa ny pesta, ka matoa tonga eto Antananarivo ny dia maloto izany ny tanàna. Tsy mandray ny andraikiny ny ben’ny tanàna, izay tompon’andraikitra voalohany amin’ny fanadiovana ny tanàna amin’ny antsipirihany, ka hatramin’ny ankapobeny mihitsy.
Efa tafahotra ny tsy fandraisan’andraikitra ataon-dRamatoa Lalao Ravalomanana matoa tonga amin’izao tranga izao ny pesta. Tsy misy afa-tsy izy no tompon’andraikitra voalohan’ny tanàna eto Antananarivo. Niady fo mafy mihitsy izy rehefa voadingana amin’ny fikarakarana lanonana hafa amin’ny maha tompon’andraikitra voalohany azy ny tanànan’Antananarivo, saingy rehefa fandraisan’andraikitra toy ny fanadiovana ny tanàna, izay tena ilàna azy sy antony nifidianan’ny vahoaka azy, dia tsy hita izay ataony.
Miharihary izao fa tsy voafehin-dramatoa ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra intsony ny fitantanana ny Commune Urbaine Antananarivo. Tsy afaka manilika andraikitra amin’ny olon-kafa izy, satria izy dia izy irery ihany no hany nofidian’ny vahoaka ho ben’ny tanàna, izany hoe hiahy ny fanadiovana tanàna, ny fikarakarana ny tsena, ny fandaminana ny taxi sns…Noho ny havesatr’ireo tsy fandraisan’andraikitra maro ireo, dia efa namoizana ain’olona maro mihitsy io valanaretina pesta io teto an-drenivohitra. Farany teo izao dia teratany Seychellois iray, izay mpandrindra ekipana basikety iray no namoy ny ainy noho ny aretina pesta. Fahafaham-baraka ho antsika Malagasy ny tondro molotry ny olona, izay milaza fa noho ny loto tao an-drenivohitr’i Madagasikara dia matin’ny pesta tany ilay “coach”Seychellois. Raha mba nandray ny andraikiny sy ny andraikitra tandrify azy fotsiny izao ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana, angamba tsy niitatra tahaka izao ny raharaha. Maro moa ny sehatr’asa velon-taraina ao amin’ny Cua ao ( ny taxi, ny mpivarotra…), saingy ity tsy fandraisan’andraikitra momba ny loto eto amin’ny tanàna iadidiany ity kosa tena efa zava-doza. Rariny ihany ny mpitaritra taxi “tsy mila Omavet” raha nitaky hatramin’ny fanesorana azy. Noheverina ho fitakiana diso lalana ihany ny azy ireo, hay tena fitakiana mitombina mihitsy, raha izao loza mananontanona vokatry ny tsy fandraisan’andraikitr’i Lalao Ravalomanana izao koa no jerena.
Ny tompon’andraikitra hafa kosa, toy ny governemanta, ny Faritra Analamanga, ny Ong tsy miankina monina eto Antanananarivo dia efa nandray ny fepetra hiadiana amin’ny pesta, fa ny tandrifin’ny Cua ihany io tsy nahitana fandraisan’andraikitra io. Ny governemanta, ohatra, dia efa nanao fivoriana maika, ary nandray andraikitra avy hatrany. Izay toerana ahiana hiparitahan’ny pesta dia nandraisana fepetra avokoa. Nisy mihitsy moa amin’izao fotoana laharana maitso ampiasaina hiadiana amin’ny pesta, dia ny 032 32 038 00- 033 65 800 00- 034 30 810 30. Ny Faritra Analamanga, koa efa nandray ny andraikiny, tamin’ny alalan’ny fitaomana ny ekipany hanao fanadiovana faobe. Izany hoe ny rehetra dia efa nandray andraikitra tandrify azy, fa ny an’ny Kaomina Antananarivo Renivohitra, toerana hitrangan’ny loza no tsy misy manao na inona na inona.
Nahaliana ireo mpandraharaha sy mpampiasa vola tao Moscou ny famelabelarana nataon’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina mikasika ny Vina Fisandratana 2030. Tao amin’ny hotel lehibe iray antsoina hoe Golden Ring no nanatontosana ny famelabelarana tamin’iny herinandro iny. ...Tohiny